Liiska SHANTA Tababare Ee Ay Man United Ka Xulan Doonto Tababaraha Cusub Ee Kooxdeeda Oo La Helay - Laacib
HomeWararka CiyaarahaLiiska SHANTA Tababare Ee Ay Man United Ka Xulan Doonto Tababaraha Cusub Ee Kooxdeeda Oo La Helay
Liiska SHANTA Tababare Ee Ay Man United Ka Xulan Doonto Tababaraha Cusub Ee Kooxdeeda Oo La Helay
November 25, 2021 Apdihakem Omer Adam
Kooxda Manchester United ayaa soo koobtay liiska tababarayaasha ay doonayo inay sida kumeel gaadhka ah kooxdeeda ugu magacawdo ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan waxaana iskugu soo hadhay shan macalin oo ay ka dhex xulan doonto.
Sida uu sheegayo wargeyska Sportsmail shanta tababare ayaa ah macalinkii hore ee Barcelona ee Ernesto Valverde, Ralf Rangnick oo RB Leipzig soo maamulay, Paul Fonseca oo xilli ciyaareedkii hore AS Roma joogay, Lucian Favre oo isaguna Borussia Dortmund soo layliyay iyo Rudi Garcia oo Lyon kasoo shaqeeyay.
Iyadoo tababaraha Paris Saint-Germain ee Mauricio Pochettino uu yahay macalinka ay rasmiga u doonayso Man United ayaysan wali wax isku day ah oo rasmi ah u gudbin kooxdaasi.
Valverde ayaa durba wadahadalo la yeeshay agaasimaha Man United ee John Murtough iyadoo wakiiladiisu ay u sheegeen inuu xiisaynayo shaqadaas kumeel gaadhka ah.
Rangnick ayaa haatan jagada agaasimaha ciyaaraha ka haya kooxda Lokomotiv Moscow balse ka daadagi doona haddiiba uu dalabka United helo isaga oo mudo dheer xiisaynayay inuu ka shaqeeyo England.
Sidoo kale Lucian Favre oo lix bilood kahor qarka u saarnaa shaqada Crystal Palace ayaa haatan wadahadalo kula jira Red Devils si lamid ah Paul Fonseca oo ku dhawaaday inuu Newcastle United ama Tottenham qabsado bilihii ugu dambeeyay kahor inta aysan wadahadalada ku kala kicin.
Rudi Garcia ayaa isaguna sanadkii hore ee 2020 shaqo cajiib ah kusoo qabtay Lyon isaga oo wareega afar dhammaadka gaadhsiiyay xilli la xusi karo inuu Manchester City ku reebay siddeed dhammaadka.
Zaciimka Samriye says:
Mamulka Manchester United Maxa ka qaldan war kuwaan wa damiino Maxaa ka raban war macalin ween nookeena shaqadiisa faraha ugu qaaada waxaa team ka. Qasayo wa Macalin damiin intee kenana ayaa hadane u shegyaan waxa u sameynayo
man united hadii ay keenaan pochetino wax hotu mar ah magaarayaan waa hubaal midaaas
Waa propaganda Laguna raadinayo Click